Fantaro i Lokosh (Joshua D. Hinson), mpampiantrano ny kaonty Twitter-n’ny @NativeLangsTech ny 3-9 Oktobra · Global Voices teny Malagasy
Fantaro ny mombamomba an'i Lokosh sy ny faniriany.
Voadika ny 31 Oktobra 2019 9:17 GMT
Ny taona 2019, ao anatin’ny hetsipanentanana anaty tambajotra sosialy ho fankalazana ny fahasamihafàn'ny teny anaty Aterineto, hifandimby hitantana ny kaonty Twittern-n'ny @NativeLangsTech ireo mpikatroka sy mpiaro ny tenin'ny Amerindiana sy ny an'ireo Firenena Voalohany mba hizaràna ireo zavatra niainany tamin'ny famelomana indray sy ny fampiroboroboana ny Tenin'ireo Amerindiana sy ireo Firenena Voalohany. Miresaka ny mombamomba an'i Lokosh (Joshua D. Hinson) (@lokosh_saya sy i @chikashshanompa) sy ny zavatra kasainy ho resahina mikasika ity herinandro ity amin'ny maha mpampiantrano azy ity lahatsoratra fampahafantarana ity.
Lokosh no anarako (Joshua D. Hinson) ary lehiben'ny Fandaharanasa Famelomana Indray ny Teny Chichasaw aho. Ekipa kely ahitàna olona roambinifolo eo izahay, izay miasa tontolo andro amin'ny famelomana indray ny teny. Miara-miasa akaiky amin'ny Kaomitin'ny teny Chickasaw izahay, kaomitin'olona miisa 25 izay ahitàna teratany mampiasa ny teny Chikashshanompa (teny Chickasaw). Natsangana tamin'ny 2007 ity fandaharanasanay ity. Manolotra karazanà fandaharana fampianarana teny izahay, isan'izany ireo asa fampilonana ireo olon-dehibe sy ireo hetsika fanatevenam-pahaizana ho an'ireo mpianatra anatin'ny sokajin-taona rehetra.
26 Jolay 2020Mediam-bahoaka